व्यापार को आन्दोलन विज्ञापन जान्छ कि, वास्तवमा पनि एक साईट उद्यमी थाह छ। कुनै कुरा आफ्नो उत्पादनहरु छन् र कसरी राम्रो गुणस्तर, कुनै कुरा कसरी कम मूल्य तपाईं आफ्नो ग्राहकहरु प्रस्ताव र केही गर्न बजार मा जानकारी प्रदान बिना छैन। त्यहाँ धेरै विज्ञापन विकल्प हो, तर यो पुस्तिका - सबैभन्दा लोकप्रिय र किफायती तरिका को एक आफूलाई व्यक्त गर्न। पुस्तिका कसरी बनाउने, अब हामी खुल्नेछ बारेमा केहि रहस्य।
एक पुस्तिका के हो?
यो छापिएको पाठ, दृष्टान्तहरू र ग्राफिक्स को केही पृष्ठहरू छ। तिनीहरूले एउटा किताब जडित वा बाजा जस्तै जोडेको गर्न सकिन्छ। ग्राहकहरु, व्यापार साझेदार र विदेशी लगानीकर्ताले गर्न सामानहरू वा सेवाहरूको निर्माण बारे जानकारी व्यक्त गर्न - पुस्तिका को मुख्य उद्देश्य। यो पुस्तिका किन सूचनात्मक र ध्यान आकर्षण गर्न र व्यापक डाटा प्रदान गर्न जीवन्त हुनुपर्छ भन्ने छ।
हामी के विज्ञापन?
पुस्तिका गर्नुअघि, तपाईं स्पष्ट हामी पछि लाग्दा छन् के लक्ष्य बुझ्न पर्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं भर्खरै बजार मा देखा छ जो कम्पनी, बारे पुस्तिका मा विशेष कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो उपयुक्त यसको लोगो र आधारभूत डाटा निर्दिष्ट छ। लागि संभावित ग्राहकहरु , उत्पादन वा सेवा प्रदान जानकारी तयार। के तपाईं तिनीहरूलाई शर्त भने पनि मूल्य, लेख्न सक्छ।
बजार मा उपलब्ध छ, जो एक विशेष उत्पादन को, प्रकार बारे बताउन केही पुस्तिका। निस्सन्देह, यो मामला मा उत्पादन को विशिष्ट विशेषताहरु बारे उपयुक्त जानकारी, साथै यसको विस्तृत विवरण हुनेछ।
कसरी ग्राहकहरु गर्न अपील गर्नेछ एक पुस्तिका सिर्जना गर्न?
यो पुस्तिका पाठ पनि गाह्रो हुँदैन। तपाईं भीख, एक निबंध प्रतियोगिता लेखकहरूले तयार, त्यसैले सादगी र brevity प्राथमिकता दिनुहोस्। खरीदार वा साझेदार सजिलै तुरुन्तै कब्जा छ अर्थ जो छोटो वाक्य, प्रतिक्रिया।
को शीर्षकहरू ध्यान, तिनीहरूले उज्ज्वल हुनुपर्छ र के थप छलफल गरिनेछ स्पष्ट व्याख्या। मानिस, पहिलो शब्द देखि पुस्तिका आफ्नो हातमा लिएर, यो जानकारी उहाँलाई रोचक वा बुझ्नुपर्छ। यो शीर्षक र यसलाई तुरुन्त ध्यान आकर्षित किनभने, उज्ज्वल expressive रंग शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ सक्नुहुन्छ।
कसरी पुस्तिका उज्ज्वल?
दृष्टान्तहरू बिना आफ्नो प्रत्याशा आफ्नै खालको ठूलो हराएको छ। आफ्नो ग्राहकहरु - मान्छे वयस्क छन्, तर तिनीहरू, साना बच्चाहरु जस्तै हुन् तस्वीर को धेरै रुचाउनु छन्। दृष्टान्तहरू कहिलेकाहीं लेखन पदहरू रूपमा धेरै समय चाहिन्छ।
तपाईं कम्पनी को बारेमा जानकारी छवि पुस्तिका छ भने, तपाईँले यसलाई लोगो राख्न सक्छ, निर्माण र निर्देशक फोटो। को अधिकारीहरु, आफ्नो अनुहार लुकाउन ग्राहकहरु र साझेदार भरोसा गर्नाले गर्नुभयो भन्ने तथ्यलाई।
उत्पादन को कहानिहरु आफ्नो छवि बिना असम्भव छ। तपाईं यात्रा को लागि कम्पनीहरु पुस्तिका कसरी बनाउने को प्रश्न संग व्यस्त छन् भने, जो पर्यटन प्रदान गर्दछ विदेशी रिसोर्ट्स, को तस्वीर पोस्ट गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
तर, सबै कुरा ठिक्क राम्रो छ भनेर सम्झना। जो पाठ देखि कम गर्न सक्छन् फोटो आफ्नो पुस्तिका, अधिभार छैन। अनुभव संस्थापक पुस्तिका बीचमा जमीन पाउन सक्षम छन्।
पुस्तिका को उत्पादन मा संलग्न छन् एजेन्सीहरू
एक विशेष कलाकार आदेश जिम्मेवार कुरा हो पहिले, आफ्नो काम जाँच गर्नुहोस्। ब्रान्डहरु र प्रशंसा गरेर निर्देशित हुन छैन, आफ्नो राय सधैं रचना। सायद पनि सबैभन्दा महत डिजाइनर तपाईं बन्द नगर्नुहोस् एक शैलीमा काम।
विकल्प सजिलो छ पनि छ। तपाईं घरमा पुस्तिका रूपरेखा तयार गर्ने फ्रीलांसरों गर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो विधि कम खर्चिलो छ, तर जोखिम एकदम वृद्धि। एक एजेन्सी संग काम गरेर, तपाईं समयमा गुणस्तर र कार्यान्वयन को एक ग्यारेन्टी प्राप्त। तर वेब डिजाइन सफ्टवेयर मा शक्ति प्रयोगकर्ता ल्याउन सक्छ।
पुस्तिका कसरी छाप्न?
विज्ञापन सामाग्री को उत्पादन मा अन्तिम चरण - यो प्रिन्ट गर्नुहोस्। यो बस छैन सुरक्षित लायक छ। उच्च गुणस्तरीय उपकरण र व्यावसायिक कलाकारहरूको एउटा छापाखाना चयन गर्नुहोस्। पनि एक सुन्दर सजावट नीरस रंग र खराब कागज बिगार्न सक्छ।
तपाईंले कहिले पुस्तिका छाप्न , आफ्नो परिसंचरण याद गर्नुहोस्। जारी धेरै हजारौं सादा कागज ठीक र सरल मुद्रण विधिहरू छ। तर थप महत्वपूर्ण निवेश केही दर्जन को परिसंचरण मुद्रण मा बनाउन सक्छ।
वसन्त टोपी केटी (काँटाले बुन्नु): हरेक स्वाद को लागि विकल्प
आफ्नै हातमा खेलौना: सी सुन्दर र अनुपम उत्पादन
यो श्रृंखला "बरफ अन्तर्गत घाँस": अभिनेता, भूमिकाको, षड्यन्त्र, सारांश
रहन सकारात्मक! अवसाद बाहिर प्राप्त गर्न कसरी धेरै तरिकाहरू
वनस्पति विज्ञान खाडी - एक स्थानमा यात्रा लायक छ कि
बायाँ वा दायाँ छेउमा यदि पेट दुख्यो - सही निदान लागि आफ्नो डाक्टर देख्न
Sputum: लक्ष्य र तरिका